बुटवलको श्रम कार्यालयमा मन्त्रीको छड्के ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
५ दिनभित्र कार्यालय सार्न निर्देशन
प्रकाशित मिति २८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १४:१२ लेखक nepali janta
बुटवल । स्थापना भएको तीन महिना नपुग्दै बुटवलकोे श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थानान्तरण हुने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री गोकर्ण विष्ट फाुगन २७ गते सोमबार श्रम कार्यालयको छड्के निरीक्षण गरेका थिए ।
निरीक्षणपछि उनले कार्यालय ५ दिनभित्र उचित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिएका हुन् । कार्यालय साँघुरो भएकोले सेवाग्राहीका लागि असुविधान हुने भन्दै मन्त्री विष्टले कार्यालयका निमित्त प्रमुख बालकृष्ण थापालाई निर्देशन दिएका हुन् ।
कार्यालय साँघुरो ठाउँमा भएकोले लाइन लाग्नसमेत नमिल्ने भन्दै सेवाग्राहीहरुले पटकपटक सेवा लिन अफ्ठ्यारो भएको गुनासो आएका थिए । सेवाग्राहीले कार्यालय उचित ठाउँमा राख्न मन्त्रालयमा समेत आग्रह गरेको मन्त्री विष्टका स्वकीय सचिव मदन खनालले बताए ।
कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण थापाका अनुसार मन्त्रीको निर्देशन अनुसार ५ दिनभित्र कार्यालय सार्न सम्भव नभएपनि कार्यालय भने सर्ने निश्चित भएको बताए । निजी घर भन्दा पनि सरकारी कार्यालय पाएमा कार्यालय सार्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यालयमा १४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ । जसमा २ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएकोमा अहिले १ जना मात्रै शाखा अधिकृतबाट कार्य सम्पादन गर्नुपरेको उनले बताए ।
गत पुस १५ गतेदेखि बुटवलको चाँदबारीमा कार्यालय संचालनमा आएको थियो ।
श्रम कार्यालय बुटवलको कार्यक्षेत्र तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलका ६ वटा जिल्लाहरु गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी रहेका छन भने राप्ती अञ्चलका ५ वटा जिल्ला रुकुम, रोल्पा, दाङ, सल्यान र प्यूठान गरी ११ वटा जिल्ला रहेका छन् ।
विदेशमा पढेका ८८ % डाक्टर फेल
काठमाडाैं । नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएकाले मेधावी विद्यार्थी पनि डलर तिरेर विदेश जान बाध्य भएको बहस चलिरहेको छ ।…
मालिन्दो एयरको जहाज दुर्घटनास्थलबाट निकालियो
काठमाडौं । मालिन्दो एयरको जहाज दुर्घटनास्थलबाट निकालिएपछि विमानस्थलमा उडान–अवतरण १२ घन्टापछि सुचारु भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गबाट…
चितवन । भरतपुर ११ को ज्ञानदर्शन बोर्डिङ स्कुलको ४ कक्षामा पढ्ने सेजल ढकालले दुई बर्षदेखि खुत्रुकेमा जम्मा गरेको रकम…
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बालुवाटारमा बस्दै, के के छन एजेन्डा ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पहिलो…